Wholesale polishing sanding muchina Mugadziri uye mutengesi | Kusanganisa
1、cambered yakasarudzika-yakasarudzika makorari muchina mhando nyowani unoshanda uye unoshanda huni pamusoro pekugadzirisa michina.Muchina uyu unotora yepamusoro-magumo kupinza zvishandiso zvine hungwaru kugadzirisa zvachose kunyatso kwehuni bhodhi kukorobha, kunyanya iko kwepakutanga kukororisa kunyatso, iyo inorumbidzwa zvikuru ne vatengi vekumusoro-soro.
2、Muchina uyu unoshandiswa zvakanyanya mukati memikova yemukati, masuo edhabhineti, fenicha uye nezvimwe zvakamonyoroka zvepurasitiki michina.Iyo inokodzera sanding yakaoma kana yakanaka, kukuya nekukorobha marudzi ese ehuni dzakasimba, mdf, bhodhi rakarongedzwa uye zvimwe zvinhu zviri munzira yakatwasuka ( senge tambo yemusuwo, furemu yemusuwo, baseboard, chikamu furemu, masitetera, nezvimwewo.) iyo yakakomberedza nzvimbo.
3、Iine shanduko yekushandisa uye inokodzera kurapwa kwepasirese sekutanga kukuya uye kupora uye mashanga machena, chena isina jecha sanding yezvikamu zvakasiyana zvebhodhi zvinosanganisira rakajeka bhodhi, tinting bhodhi uye yekutanga pendi.
4、Muchina unomhanya mhanya unogadziriswa, hapana ruzha. longitudinal roller uye yakareba roller yakasanganisa disc kukuya inoita kuti iyo kukuya yakafa-nzvimbo yemahara.
Zvikamu zvishanu zveakaremerwa zvinhu zvekutakura bhandi, kushandiswa kwenguva yakareba hakuzoonekwe kutsauka. Iyo inoshanda iri kushandisa chiteshi simbi simbi yakasimba simbi ndiro ine yekutanga kutsauka mudziyo.
Inoshandiswa pakumedza kutwasuka, inokodzera grooves, kutema, hollowing lattice, nyore kuchinja
Inoshandiswa pakukuya kwendege bhodhi
Slant nyoro matanda- shandisa 2 mipumburu, slant mashoma akaomarara matanda- shandisa 2-4 rolls
Waya yekudhirowa roller
Inoshandiswa pakudhirowa waya kwetsanga yezviyo
Iyi ficha inosarudzika
Pashure: plywood yekugadzira mutsara
Zvadaro: chokurukisa huni peeling muchina